ရန်ကုန် အတွက်ပဲ အဓိက မှာယူထားတဲ့ ကိုဗစ်အမြန်စစ် ကိရိယာတွေနဲ့ ဦးစားပေး စစ်ပေးမည့်သူများ - Shweman
ရန်ကုန် အတွက်ပဲ အဓိက မှာယူထားတဲ့ ကိုဗစ်အမြန်စစ် ကိရိယာတွေနဲ့ ဦးစားပေး စစ်ပေးမည့်သူများ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက မှာယူထားသည့် ကိုဗစ် ရောဂါပိုး ရှိ ၊ မရှိ လျှင်မြန်စွာစစ်ဆေးပေးနိုင်မည့် Test Kit (စမ်းသပ်ကိရိယာအစုံ)များသည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက် အဓိကမှာယူထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးက
ပြောပါတယ်။ “လောလောဆယ် ရန်ကုန်တိုင်းအတွက်ပဲ လျာထားသေး တယ်ခင်ဗျ။ ရန်ကုန်တိုင်း အတွက်ပဲ လတ်တလော အစီအစဉ်ရှိပါသေးတယ်။
ကျန်တဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဒေသကြီးတွေကို တိုးချဲ့ဖို့ အစီအစဉ်ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ ထပ်မံပြီးပြောကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုးက ပြောပါတယ်။
၎င်း Test kit များ ကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ မှ အခုရေ နှစ်သိန်းမှာယူထားပြီး စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် အခုရေ ခြောက်သောင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ရက်
နေ့တွင် အခုရေ တစ်သိန်းလေးသောင်းထပ်မံရောက် ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ယနေ့(စက်တင်ဘာ ၂၉ရက်)တွင် တောင်ကိုရီးယားအစိုးရက လှူဒါန်းသည့် Test kit ငါး
Test Kit များအား ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်ရှိသည့် ဆေးရုံများတွင် ဦးစွာလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်အဆင့် ဆေးရုံများတွင် ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့
လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။. ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ကြီး၊ ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါ ကုဆေးရုံသစ်ကြီး၊ ရန်ကုန်အ နောက်ပိုင်းဆေးရုံ၊
မြောက်ဥက္က လာပ၊အင်းစိန်၊ လှိုင်သာယာ၊ သန်လျင် နှင့် သင်္ဃန်းကျွန်း စသည့် ဆေးရုံကြီးကိုးခု၌ ယနေ့(စက်တင်ဘာ ၂၉ရက်)တွင် စတင်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်
ကြောင်း ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုး က ပြောပါတယ်။
“ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ ဆေးရုံကြီး (၉) ရုံပေါ့နော်။ ဒီနေ့စပြီး တော့ ခွဲတမ်း ရှိတယ်ဗျ သူက။ ရာရှင်(Ration) အလိုက် စစ်ဆေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က
စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ ဒီ Target အုပ်စုတွေကို အရင်ဆုံးစစ်ဆေး မှာဖြစ်ပါတယ်။ Target အုပ်စုမှာပါတာတော့ နံပါတ်တစ်က ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအုပ်စုတွေ ဖြစ်ပါ
တယ်။ အနီးကပ်ဆုံးထိတွေ့နေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗပါ့နော်။ သူတို့မှာ ပိုးမရှိတော့မှ သူတို့မိသားစုတွေလည်း မရှိမှ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်
နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ နံပါတ် နှစ်ကတော့ PUI လို့ခေါ်တဲ့ စောင့်ကြည့်လူနာတွေပေါ့။
ဒီလူနာတွေကလည်း မြန်မြန်စစ်နိုင်လေလေ သူတို့အတွက်က ကောင်းလေလေပေါ့။ တတိယမြောက်ကတော့ အနီးကပ်ဆုံးထိတွေ့ထားတဲ့ သူအုပ်စုပေါ့နော်။
အဲ့တော့ ဒီအုပ်စုတွေကို စစ်ဆေးပြီး တော့ ရရှိလာတဲ့အဖြေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ထပ်မံပြီး ဒီထက်ကျယ်ပြန့်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်း အဆင့် လိုက်အပိုင်းလိုက်
ပေါ့နော် ။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လမ်းညွှန်မှု၊ ဗဟိုကော်မတီရဲ့ လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း ဆက် လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးက
၎င်း Test Kit များသည် ရောဂါပိုးရှိ၊မရှိ မြန်မြန်စစ်ဆေးနိုင်သည့် အတွက် ပိုးရှိသူ ပိုမိုများပြားစွာတွေ့ လာမည်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင် ခံပုဂ္ဂိုလ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုထားပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၉ရက်နေ့ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ကိုဗစ် ရောဂါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံသည်
ယခင်နံပါတ် ငါးနေရာသို့ ရောက်ရှိနေရာမှ ယခုတွင် နံပါတ် လေး နေရာသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံက မှာယူထားသညျ့ ကိုဗဈ ရောဂါပိုး ရှိ ၊ မရှိ လြှငျမွနျစှာစဈဆေးပေးနိုငျမညျ့ Test Kit (စမျးသပျကိရိယာအစုံ)မြားသညျ
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှကျ အဓိကမှာယူထားခွငျးဖွဈကွောငျး ကနျြးမာရေး နှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာမှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုးက
ပွောပါတယျ။ “လောလောဆယျ ရနျကုနျတိုငျးအတှကျပဲ လြာထားသေး တယျခငျဗြ။ ရနျကုနျတိုငျး အတှကျပဲ လတျတလော အစီအစဉျရှိပါသေးတယျ။ ကနျြ
တဲ့ တိုငျးနဲ့ပွညျနယျဒသေကွီးတှကေို တိုးခြဲ့ဖို့ အစီအစဉျရှိရငျ ကြှနျတျောတို့ ထပျမံပွီးပွောကွားမှာ ဖွဈပါတယျ” ဟု ဒေါကျတာ သနျးနိုငျစိုးက ပွောပါတယျ။
၎င်းငျး Test kit မြား ကို တောငျကိုရီးယားနိုငျငံ မှ အခုရေ နှဈသိနျးမှာယူထားပွီး စကျတငျဘာ ၂၇ ရကျတှငျ အခုရေ ခွောကျသောငျး၊ စကျတငျဘာ
၂၈ရကျနတှေ့ငျ အခုရေ တဈသိနျးလေးသောငျးထပျမံရောကျ ရှိခဲ့ကွောငျးနှငျ့ ယနေ့(စကျတငျဘာ ၂၉ရကျ)တှငျ တောငျကိုရီးယားအစိုးရက လှူဒါနျးသညျ့
Test kit ငါးထောငျ ထပျမံရောကျရှိမညျဖွဈပါတယျ။ Test Kit မြားအား ပွညျနယျနှငျ့တိုငျးဒသေကွီး အဆငျ့ရှိသညျ့ ဆေးရုံမြားတှငျ ဦးစှာလုပျဆောငျ
မညျဖွဈပွီး မွို့နယျအဆငျ့ ဆေးရုံမြားတှငျ ဒုတိယအဆငျ့အနနေဲ့ လုပျဆောငျမှာ ဖွဈပါတယျ။.
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတှငျ ရနျကုနျပွညျသူ့ဆေးရုံ ကွီး၊ ရနျကုနျအထှထှေရေောဂါ ကုဆေးရုံသဈကွီး၊ ရနျကုနျအ နောကျပိုငျးဆေးရုံ၊ မွောကျဥက်က လာပ၊အငျး
စိနျ၊ လှိုငျသာယာ၊ သနျလငျြ နှငျ့ သင်ျဃနျးကြှနျး စသညျ့ ဆေးရုံကွီးကိုးခု၌ ယနေ့(စကျတငျဘာ ၂၉ရကျ)တှငျ စတငျလုပျဆောငျမညျဖွဈကွောငျး
ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုး က ပွောပါတယျ။
“ရနျကုနျမွို့မှာရှိတဲ့ ဆေးရုံကွီး (၉) ရုံပေါ့နျော။ ဒီနစေ့ပွီး တော့ ခှဲတမျး ရှိတယျဗြ သူက။ ရာရှငျ(Ration) အလိုကျ စဈဆေးပေးမှာဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့က စဈဆေးတဲ့အခါမှာ ဒီ Target အုပျစုတှကေို အရငျဆုံးစဈဆေး မှာဖွဈပါတယျ။ Target အုပျစုမှာပါတာတော့ နံပါတျတဈက ကနျြးမာရေး
ဝနျထမျးအုပျစုတှေ ဖွဈပါတယျ။ အနီးကပျဆုံးထိတှနေ့ရေတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှဗေပါ့နျော။ သူတို့မှာ ပိုးမရှိတော့မှ သူတို့မိသားစုတှလေညျး မရှိမှ စိတျခမျြးသာ
ကိုယျခမျြးသာနဲ့ လုပျငနျးဆောငျရှကျနိုငျမှာဖွဈတယျပေါ့နျော။ နံပါတျ နှဈကတော့ PUI လို့ချေါတဲ့ စောငျ့ကွညျ့လူနာတှပေေါ့။
ဒီလူနာတှကေလညျး မွနျမွနျစဈနိုငျလလေေ သူတို့အတှကျက ကောငျးလလေပေေါ့။ တတိယမွောကျကတော့ အနီးကပျဆုံးထိတှထေ့ားတဲ့ သူအုပျစုပေါ့နျော။ အဲ့
တော့ ဒီအုပျစုတှကေို စဈဆေးပွီး တော့ ရရှိလာတဲ့အဖွပေျေါမှာမူတညျပွီးတော့ ထပျမံပွီး ဒီထကျကယျြပွနျ့တဲ့စဈဆေးမှုတှကေိုလညျး အဆငျ့ လိုကျအပိုငျး
လိုကျပေါ့နျော ။ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ လမျးညှနျမှု၊ ဗဟိုကျောမတီရဲ့ လမျးညှနျမှုအတိုငျး ဆကျ လကျဆောငျရှကျသှားမှာဖွဈပါတယျ” ဟု
၎င်းငျး Test Kit မြားသညျ ရောဂါပိုးရှိ၊မရှိ မွနျမွနျစဈဆေးနိုငျသညျ့ အတှကျ ပိုးရှိသူ ပိုမိုမြားပွားစှာတှေ့ လာမညျဟု နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျ ခံ
ပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ပွောဆိုထားပါတယျ။ စကျတငျဘာ ၂၉ရကျနေ့ အာဆီယံနိုငျငံမြား၏ ကိုဗဈ ရောဂါ သတငျးထုတျပွနျခကျြအရ မွနျမာနိုငျငံ
သညျ ယခငျနံပါတျ ငါးနရောသို့ ရောကျရှိနရောမှ ယခုတှငျ နံပါတျ လေး နရောသို့ ရောကျရှိနကွေောငျး သိရပါတယျ။
မြိတ်တွင် covid-19 ပိုးတွေ့ အတည်ပြုလူနာ (၅) ဦး ထပ်တိုး
စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း ဟုမ္မလင်းမြို့ရှိ ပထမဆုံး ကိုဗစ်လူနာ အမျိုးသမီးမှာ ယနေ့ဆေးရုံဆင်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဧရာဝတီစင်တာ C...
မင်္ဂလာဒုံ မှန်ဘီလူးစက်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၃၀၀...
မူဆယ်မြို့မှ မန္တလေးမြို့သို့ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ သုံးဦး...
ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း (၁၂,၃၀၇) ခုအား...